6 Pụrụ Iche Uru nke Nootropic Sunifiram (DM235) Ngwá
1 Dị ka
1. Kedu ihe bụ Nootropics na Sunifiram?
2. Kedu ka Sunifiram si arụ ọrụ?
3. Onu ogugu ise nke Sunifiram
4. Otu esi eji Sunifiram
6. Kedu ihe bụ mmetụta nke Sunifiram
7. Onye nwere ike iji Sunifiram
Kedu ihe bụ Nootropics na Sunifiram?
Icheela echiche banyere ịmepụta nnukwu ihe ndị dị na ncheta, ilekwasị anya, na ichepụta ihe? Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịchọọ ule gị ma chee na ị na-arụsi ọrụ ike ka ị ghara ịkụcha mmanụ nke etiti abalị. Ihe dị mma bụ, ị nwere ike ugbu a na-eme ka ikike obi gị dị mfe n'ụzọ dị mkpirikpi. Na nbuta nke teknụzụ, ị nwere ike ịmatakwu banyere ngwaahịa ndị ga-ebute gị ụzọ.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịchọrọ imeziwanye ka ụbụrụ gị na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-anwale iji nootropics. Nootropic sitere na okwu "NOUS" na "TROPOS" nke pụtara ụbụrụ, gbanwere ma ọ bụ gbanwee, n'otu n'otu. A maara ha nke ọma dịka ọgwụ ndị dị mma nke na-eme ka ọrụ nlegharị anya ya dịkwuo mma. Kemgbe ọtụtụ afọ, a marawo na nootropics na-ebuwanye nkọ ma na-emetụta ikike uche n'uche n'ụzọ dị egwu.
Nootropics na-abanye n'aka, karịsịa mgbe ị na-adabere na nguzozi ma chọọ ihe iji mee ka ị pụọ. Ndị ọchụnta ego, ụmụ akwụkwọ, na ọbụna ndị agha na-eji nootropics eme ihe mgbe nile iji chọpụta ihu ha. N'aka nke ọzọ, a kọrọ na nootropics ga-aba uru na ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na nsogbu ọrụ mịịka dịka Huntington, Parkinson, ADHD, na ọrịa Alzheimer.
Otu n'ime nootropics nke na-enye nsonaazụ magburu onwe ya bụ Sunifiram, nke a makwaara dị ka DM-235. Uzo ya yiri nke racetam nootropics kama o di puku ugboro karia piracetam. Ọkara ndụ Sunifiram bụ otu awa abụọ.
A na-emepụta nke a na afọ 2000 site na ndị ọkà mmụta sayensị si Mahadum Firenze nke dị n'Ịtali. A chọpụtabeghị ya, ma ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ ndị e mere na ya na-egosi na ọ bụ oke arụmọrụ nke na-enwekwa ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa na njikwa nke ọrịa ọrịa na-adịghị.
Kedu ka Sunifiram si arụ ọrụ?
Ọ bụ ezie na Sunifiram a na-ewere ya dị ka ihe piracetam, ọdịdị ya dị iche ma e jiri ya tụnyere racetams. A na-ahazi ya n'otu klas ahụ dịka alkaloid piperazine.
Ọ bụ ezie na a ghọtaghị usoro ọrụ ya nke ọma, a maara na ọ ga-arụ ọrụ site na mkpali nke ndị ọrụ nchịkọta nke glutamate. Ọ na-eme ka mmepụta na ntọhapụ nke acetylcholine, nke bụ ihe ntanetransmitter mmụta.
A na-eche na usoro ihe mgbochi Sunifiram bụ nke ampakine. Nke ahụ pụtara na ozugbo ọ na-agafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara, ọ na ejikọta ya na ndị na-anabata glutamate ụdị AMPA dị n'ụbụrụ. N'ihi ya, enwere mkpali nke mmepụta nke glutamate, nke bụ ihe dị oké mkpa na-adịghị ahụ maka mgbapụta na ọrụ ọrụ ya.
Glutamate bu onye neurotransmitter na-achota onye oru ya bu ikwalite synaptic plasticity. Nke ahụ pụtara na ọ na-eme ka ikike mgbatị ahụ nwere ike imeghachi omume na mmụba ma ọ bụ ibelata ọrụ.
Ahụ kwesiri ogo nke glutamate n'ihi na enwere ike inwe ogologo oge ma ọ bụ kama inwe mmelite na-adịgide adịgide na ike mgbaàmà n'etiti etiti.
Nakwa, etoju glutamate dị oké mkpa na hippocampus, nke ọrụ ya n'ụbụrụ bụ ikwe ka igodo igodo. Ọ na-enyekwa maka nhazi na nchekwa nke ebe nchekwa. A kwenyere na ikike Sunifiram ịkwalite ọrụ ntụgharị uche bụ n'ihi mmụba nke ike mgbagwoju anya dị na hippocampus.
Ndị ọzọ karịa ịmepụta ebe nchekwa na ncheta, ampakines na-enye mmetụ dị nwayọọ nke na-enyere aka na-amụba anya na ike. N'ụzọ dị nro, ọ naghị akpata nkwụsịtụ, na mmetụta ndị ọzọ na-akpata site n'iji ọgwụ na-akpali akpali dịka amphetamines, methylphenidate (Ritalin), na caffeine.
Tụkwasị na nke a, Sunifiram na-eme ka cholinergic site n'ịbawanye mmepụta na ịhapụ acetylcholine. Acetylcholine na-emetụta ọtụtụ ihe cognition, gụnyere ngwa ngwa na ikike mmụta, ebe nchekwa, na ike iji dozie nsogbu ndị pụrụ iche na-enweghị ịdabere na omume mmụta.
Ọ bụ ezie na a matabeghị otú Sunifiram si achịkwa mmepụta nke acetylcholine, nchọpụta anụ anụmanụ Ịtali gosiri na DM235 nwere mmetụta cholinergic dịka piracetam.
Usoro nke Sunifiram na nke Adderall dị nnọọ iche ebe ọ bụ na Adderall na-arụ ọrụ site na-akpali akpali nke norepinephrine na dopamine, nke na-eme ka otu onye gbanwee ma na-eduga n'inwe mmetụta anụ ahụ na nke uche.
N'aka nke ọzọ, Sunifiram, na-arụ ọrụ site na ndị ntinye ihe oriri na-eri nri site na nke a na-amụba nchịkọta ncheta.
Onu ogugu ise nke Sunifiram
Inwekwuo ike inwe mmekọahụ
Onye obula kwesiri inwe obi uto nke nwanyi. Ọ bụ ezie na mmekọahụ na-atọ ụtọ bụ otu n'ime ihe ndị mmadụ kwesịrị ịnụ ụtọ oge niile, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ikpe maka onye ọ bụla.
Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịdị na-enwe mmetụta n'oge niile mgbe ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe n'oge ruo n'oge. A obere mmekọahụ ụgbọala nwere ike ime ka ị na-ata ahụhụ n'ụzọ mmetụta uche ma metụta mmekọrịta gị. Ọ dabara nke ọma, n'agbanyeghị agbatị gị nwere ike ịbụ, enwere enyemaka.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe ị pụrụ isi mee onwe gị ka gị na onye ịlụ gị nwee ezigbo oge bụ iji Sunifiram. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ ihe na-eme ka ị chee na ị pụghị iguzogide onye gị na ya ga-alụ. Nnyocha e mere na ma ndị nwoke ma ndị nwanyị gosiri na otu n'ime uru Sunifiram bụ na ọ na-enye otu ụdị ọrịa aphrodisiac na-ewere ya.
Ọ bụ ezie na amatabeghị otú ọ na - akpata mmụba na libido, ụfọdụ echiche na - atụ aro na ọ na - eduga n'ọganihu ọbara na - amụba na amụ na ikpu.
Ọzọkwa, Sunifiram ntụ ntụ nwere ike ime ka mma ndụ nwoke na nwanyị dịkwuo mma site n'ime ka ọ dịkwuo mfe imetụ aka, na-eme ka ume dịkwuo ala na site n'ịkwalite ịhapụ nsụmnta dopamine na serotonin (ọgwụ dị mma) n'ime ụbụrụ.
Ịhụ ọhụụ na nghọta
Taa, ọ ga-abụ na anya anyị ga-ata nsogbu anya n'ihi ike ọgwụgwụ. Ịtụle obere nọmba na ihe oyiyi na obere nza, ekwentị, na telivishọn nwekwara ike inye aka na ya. Kasị njọ ka ụfọdụ n'ime ọgwụgwọ ahụ nwere ike ọ gaghị adịrị anyị mfe, karịsịa mgbe a manyere gị ugbu a ịhụ ihe ngosi.
Ezi ọhụụ dị mkpa n'ihi na ọ na-aga ogologo oge iji meziwanye arụmọrụ ya. Ọ bụrụ na ọhụụ gị dị n'elu, o yikarịrị ka ị ga-ahụ mgbanwe ma meeghachi ha ngwa ngwa. Ị chetụla otu ụzọ ị ga - esi mee ka ọhụụ gị dịkwuo mma n'ebughị ụzọ tinye iko ndị nwere ike ibelata mmetụta ma mebie emebi anya?
Sun kọrọ na Sunifiram inye ndị ọrụ ya ihe na-eme ka ìhè na ọchịchịrị pụta. Ọ na-emekwa ka agba dị mma.
Maka ndị ọzọ, Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) na-akọ na-eme ka egwu na-etinye uche na uche ma na-enye afọ ojuju obi.
Ọ bụ ume na ume ike
Ị chọtara onwe gị n'ọnọdụ obi ọjọọ, nke na-adịghị mma, na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ na-adịghị emepụta ihe? Ọ dị gị ka ike ike ọkwa dị iche iche na-adọrọ gị ala ma ọ bụghị ọbụna kọfị kọfị ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ike dị ka ọ na-enye gị elu? Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, mgbe ahụ, ịnwere ike ịnwale mmetụta Sunifiram iji mee ka ụdọ ahụ ghara ịdaba na mmiri.
Ndị so na Sunifiram kwuru na ọ gbakwunyere ume ha ma mee ka ha nwee echiche dị mma. Maka ike iji nweta ume, ụbụrụ na-eji glucose nke ọbara ọbara ọbara na-enyekarị. Otu n'ime ọgwụ ndị na-egbochi glucose n'ofe cell membranes bụ Pentobarbital. Akara Sunifiram onyonyo gosipụtara otu mmetụta ahụ.
N'ebe dị elu, ọ na-egbochi glucose ịhapụ sel ọbara uhie. Ya mere, ọ bara uru na obere ihe n'ihi na ọ na-akwalite nlekota glucose.
Ọ na-eme ka nlezianya anya, mkpali na iche echiche uche
Anyị bi n'ụwa nke ọtụtụ ihe na-ejide. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike na-atụ anyị ala ma na-eweda anyị ala. Ihe omimi nke inwe uzo kwa ubochi, n'otu ugbua oge na ime otu ihe nwere ike igbagha ayi. Ọ bụ ezie na mkpali siri ike na ilekwasị anya dị mkpa na ihe niile mmadụ nwere ike ịrụ, iru ha nwere ike ọ gaghị adị mfe.
Ọtụtụ ndụmọdụ na otú ị ga - esi meziwanye nlekwasị anya gị na etinye uche na weebụ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ghara ịma nke onye n'ime ha na-anapụta, ị nwere ike ịchọ ịma banyere Sunifiram mmetụta na otu.
Otu n'ime uru ndị Sunifiram bụ na ọ na-eme ka nchekwube, anya, na ido uche doo anya. Ọ na-enye aka melite mkpali nke dị oké mkpa maka nlekota nke ọma na mmezu nke ọrụ uche.
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na Sunifiram na-eme ka mmepụta nke neurotransmitter acetylcholine mepụtara, ọrụ ya bụ iji kwalite ikike ime uche.
Mee ka mmụta na ebe nchekwa dịkwuo mma
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị kwenyere na ị pụghị ịkụziri nkịta ochie nkịta ọhụrụ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ma ọ bụrụ na ụbụrụ gị abịa. N'agbanyeghị afọ ole gị, ụbụrụ gị nwere ike ịgbanwe ma gbanwee ma a bịa n'icheta na ikike mmụta. Site na ndozi kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ime ka ikike ịmụta ihe ọhụrụ dị ka nke ọma yana ịme ka ncheta gị dịkwuo mma.
Ihe omumu omumu gosiri na Sunifiram na eme ka ihe omumu na ihe omuma ya di. Ndị ọzọ karịa ịmepụta arụmọrụ n'ịmụ ihe, ọ gbanwere n'ụzọ dị irè amnesia. Nnyocha e mere na onye ahụike ahụike gosiri na ọbụnadị obere obere, ọ ka bara uru na mmelite ncheta na mmụta.
Onye ọrụ Sunifiram nwere mmụba IQ ya site na isi iri na ise mgbe o jiri Sunifiram dosage nke 25mg ugboro anọ kwa izu maka ọnwa anọ.
O nwere ike ibelata ihe mgbu
Mmetụta ahụike nke Sunifiram na-enye aka ya na-eme ka a ihe mgbu na ịma mma nke na-abịa ya bụ na ọ bụghị ịda mbà n'obi na nchekasị mmetụta nke ọzọ na-akpata ihe mgbu na-akpata.
Nnyocha e mere na ụmụ oke gosiri na Sunifiram supplementation na-egbu oge mmeghachi omume ha na-ekpo ọkụ, na-egosi na nootropic a nwere ihe mgbu na-edozi njirimara. Enwere mmetụta a ka ọ bụrụ ọnụ na Sunifiram dosage nke (0.01 mg / kg) ga-adị elu, ma ọ bụ usoro osụhọde ala adịghị arụ ọrụ.
Otu esi eji Sunifiram
Sunifiram bụ otu n'ime mba ndị kasị sie ike n'ahịa taa, ma, ya mere, a ga-eji nlezianya buru ya. Ebe ọ bụ na a gụbeghị ya nke ọma, ọ na-esiri ike iji usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, otu kwesịrị, na-enwe obere usoro, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ya maka oge mbụ.
N'ihe ka ukwuu, ọ na-abịa n'ụdị uzuzu, na mmalite ọgwụ Sunifiram a na-atụ aro bụ 3mg ka 4mg were ugboro atọ n'ụbọchị.
Otutu, enwere uzo abuo uzo i nwere ike were Sunifiram uzuzu; ị nwere ike ịhọrọ ịjikọ ya na mmiri ma ọ bụ jiri ya mee ya. Ọ bụrụ na ịdebe ya n'okpuru ire gị, ị ga-ahụ obere ntụgharị nsị ma ọ bụ tingling dị ka nke ị na-eche mgbe ị na-etinye mint ume ume n'okpuru ire gị.
Achọpụtala ihe ndị na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ike. Ị maara na mgbakwunye mgbakwunye a emetụtala ozugbo ị malitere ịmalite mmetụta mmetụta dị ka nke Adderall.
Ozugbo ị ghọworo onye ọrụ Sunifiram nwere ahụmahụ, ị ​​nwere ike iwelie usoro ọgwụgwọ na 5mg ma ọ bụ 8mg nwayọọ nwayọọ. Nke ahụ bụ ọgwụgwọ zuru oke nke onye ọrụ nwere ahụmahụ kwesịrị iji. Tupu ị na-amụba usoro ọgwụgwọ, jide n'aka na ị na-ewere nootropic maka ihe karịrị otu izu n'iji dosages.
Okwesighi igabiga 10mg kwa ubochi n'ihi na a ka na-amu ihe ojoo nke Sunifiram. Iwere ya ruo ogologo oge nwere ike ime ka mmadụ ghara ịnagide ya; ya mere, ihe kachasị mma ịme bụ iji ọsọ na-agba Sunifiram cycles tinyere nkwụsịtụ.
Ogwe Sunifiram bụ Nchikota nke Sunifiram na otu ma ọ bụ karịa mgbakwunye nchịkọta na-ejikọta ọnụ ma ọ bụ n'usoro iji nwee mmetụ ndị ọzọ. Nweta Sunifiram naanị na-enye uru standalone ma na-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ nootropic pụtara na uru ga-aba ụba. Otú ọ dị, ị ghaghị ịkpachara anya banyere usoro ọgwụgwọ Sunifiram ị na-ekpebi ị ga-ejikọta ya na ndị ọzọ nootropics ruo mgbe ị matara mmeghachi omume gị n'ebe ha nọ.
Maka mmelite obi
Lee dị iche iche nootropics na nchịkọta nke ọma na Sunifiram iji dozie nsogbu ọnọdụ obi ọjọọ.
L-theanine- Ọ na-arụ ọrụ site n'ịkwalite mmepụta nke GABA, serotonin, na dopamine. Ọ na-egbochi redupamine reuptake.
Sulbutiamine- Ọ nwere ike iji glutamatergic, dopaminergic na cholinergic nnyefe.
Echefukwala itinye ezigbo nhazi nke ga - eme ka onye nwere ike ma gbochie gị isi ihe mgbu na mmetụta ndị ọzọ.
Maka mmetụta uche
Mkpokọta Sunifiram a bụ otu n'ime ụdị nchịkọta kachasị. Maka mmetụta mmetụ dị mma, Sunifiram na-ejikarị otu ma ọ bụ karịa nootropics si n'ezinụlọ racetam dịka Noopept, Oxiracetam, na Piracetam. Ebe ọ bụ na a maara racetams iji belata ọkwa choline n'ime ụbụrụ, ezigbo nhazi dị ka Alpha GPC, a na-atụ aro centrophenoxine ma ọ bụ CDP choline.
Kedu ihe bụ mmetụta nke Sunifiram
N'ebe onye ọ bụla nọ na-achọ ụzọ ha ga-esi meziwanye ọrụ ha na ahụike ha n'ozuzu ya, ọtụtụ adawo maka ihe mgbakwunye nke kpatara ọrịa na ahụ ike ha. Ụfọdụ nwere ike ịkpata nsogbu ahụike, ebe ndị ọzọ nwere ike imerụ ahụ ahụ. Ihe kachasị mma nke ga-eme ka ị nweta uru na-enweghị ịhapụ enyemaka bụ Sunifiram.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị Sunifiram kpatara mmetụta dị oke egwu, ma ọ dị mma iburu n'uche na ụmụ mmadụ amụlebeghị ma chọpụta nsogbu ndị a. Nnyocha e mere na ụmụ anụmanụ na-egosi na nhụjuanya a dị mma ma dị mma. Ọ na-egosikwa na ọbụna n'ọdịdị dị elu karịa ihe e kwuru na ya, ọ gaghị etinye ihe ize ndụ nke nsí.
All mmetụta mmetụta Sunifiram ndị a kọọrọ dị ntakịrị wee pụọ n'egbughị oge. Ha na-agụnye mmụba na ogo ahụ mmadụ, mmụba salivation, na mmiri. O nwekwara ike ime ka isi ọwụwa, na-enwekwu mmetụta maka mmetụ nke ọdịyo na nke visual, nhụjuanya nhụzi, na ụra nke ọma.
A kọwawo mmetụta ndị a Sunifiram ka ọ na-abawanye mgbe mmadụ na-ewere ọgwụ dị ukwuu Sunifiram ma ọ bụ jikọta ya na mgbakwunye ndị ọzọ. Ọ bụrụ na iwere usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla site na mmetụta ọ bụla a kpọtụrụ aha. Mgbe ọ bụla ị na-eche ka isi ihe mgbu na-aga na, ị kwesịrị ị na-aga Alpha GPC.
Onye nwere ike iji Sunifiram
Sunifiram zuru oke maka;
Ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịmụta ma debe ọtụtụ ozi.
Ndị mmadụ na-amụchi ihe omume ọhụrụ, ya bụ, ndị na-emepụta kọmputa na ndị chọrọ ka ha mara mgbe niile ihe ndị dị na ya dị ka ndị na-emepụta weebụ.
Ndị injinia na ndị ọrụ ntanetị nke ọrụ ha chọrọ ka ha bụrụ ihe okike na ihe nkwụsị nsogbu nsogbu
Ndị ọ dị mkpa ka ha gụọ ọtụtụ ihe iji nụchaa ndị ọkachamara na ndị ọkachamara
Dị ka a hụrụ na isiokwu ahụ, Sunifiram bụ ụdị nootropic nke ga-egbo mkpa nke ahụ gị gburugburu. Mgbe ọ na-abịa na nchekwa, ọ nwere ya na ibu; mgbe niile, ọ gaghị abịa mmetụta nke ahụ ga - eme ka ị hụ dọkịta mgbe ị nụsịrị ya. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ nchịkwa ziri ezi iji jikọta na ya ma jiri ego ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Kwadoro maka nke gi taa ma mezuo ihe mgbaru ọsọ nke anu aru gi.
Phosphotransferases-Ọganihu na Nyocha na Ngwa: mbipụta 2013, peeji nke 16-30
Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, General Books, 1-36 peeji nke
Mmetụta Na-agbasi Obi: Ụzọ Ọdịnihu nke Ịmalite Ịchọpụta Ihe, Site n'aka Anthony Simola.
2019-10-30 na 12: 57 pm
ndewo !, Ahụrụ m ederede gị n'anya nke ukwuu! nkezi anyị na-ejikọ otu mmekorita banyere post gị na AOL? Achọrọ m ọkachamara na oghere a iji kpughee nsogbu m. Ma eleghị anya, ọ bụ gị! Na-ele anya na-elebara gị anya.
Peptide Epithalon Acetate: Ọ bụ ọgwụ ọjọọ ọzọ meworo agadi?
Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Tupu Ịzụta Peptide Alarelin?